Kuyadingeka: Umshuwalense wezempilo wabavakashi be-European Union
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba ze-Andorra Breaking » Kuyadingeka: Umshuwalense wezempilo wabavakashi be-European Union
Izindaba ze-Andorra Breaking • Izindaba zase-Austria • IBelgium Izindaba Ezintsha • Izindaba zeBulgaria Breaking • Izindaba ZaseCroatia • Izindaba zeCzechia Breaking • Izindaba ZaseDenmark • I-Finland Breaking News • France Izindaba Ezintsha • Izindaba zaseJalimane • IHungary Izindaba Ezintsha • Izindaba Zase-Italy • Izindaba zeLiechtenstein • Izindaba ZaseLuxembourg • Izindaba zeMalta Breaking • Izindaba zeMonaco Breaking • Izindaba zaseNetherlands • Izindaba • Izindaba zeNorway Breaking • Izindaba ZasePoland • Izindaba zaseSlovenia • ISwitzerland Izindaba Ezintsha • Ezokuvakasha
Kwangathi 25, 2017
Ingabe uyisakhamuzi sezwe i-EU edinga ukuba ne-visa yokungena? Ama-visa ayadingeka kulezi zakhamizi futhi uma ehlala emazweni afana ne-United States noma Canada. Ingabe uyisakhamuzi sanoma yiliphi izwe elingaphandle kweYurophu uhlela ukuhlala isikhathi eside eYurophu ukuthola umsebenzi noma ukuzilibazisa?
Uma impendulo yakho inguyebo ungakhumbula ukunakekelwa kuka-Obama noma ukunakekelwa kwezempilo kwabo bonke. EYurophu, hhayi izakhamizi kuphela ezidinga umshuwalense wezempilo, kepha nezivakashi. Okuhlukile ukuvakashelwa isikhathi esifushane okuvela kwizakhamizi ezingangena e-EU ngaphandle kwe-visa. Ukuze ama-consulates akhiphe i-visa evumelekile esifundeni saseSchengen, kudingeka ubufakazi bokutholakala kwezempilo.
Ukuze amazwe e-EU akhiphe i-visa evumelekile esifundeni saseSchengen, kudingeka ubufakazi bokutholakala kwezempilo.
Yini okuzodingeka uyazi lapho uthenga umshuwalense.
Umshwalense kumele usebenze kuwo wonke amazwe e-EU naseSchengen
Umshwalense kufanele umboze isikhathi sokuhlala kwakho konke, noma ngabe uhamba nje
Inani eliphansi lomshuwalense wakho kufanele libe yi-EIRP 30,000.00
Wonke amazwe e-EU anemithetho ethile yezwe okufanele uyihlole.
Isibonelo, eJalimane, umshwalense wakho kufanele ukhokhele i-100% yazo zonke izindleko zesibhedlela, noma ngabe unenqubo yokugula noma wamukelwa. Lokhu kufanele kufaka phakathi uma kufanele ubonwe ngungoti. Izindleko eziphuma ephaketheni zanoma imuphi umshwalense azikwazi ukudlula i-5,000 Euro.
Uma kwenzeka ungadingi i-visa yokungena kokuqala ezweni oya kulo, udinga ukunikeza ubufakazi bomshuwalense ezinsukwini ezingama-31 zakamuva ngemuva kokufika kwakho. Iziphathimandla ziqeqeshwe kahle ukubheka lokhu. Osomaqhinga abakhululwa.
Kulula futhi kuyashesha ukuthenga umshwalense onjalo.
Ochwepheshe batusa ukuxhumana nemishwalense efana ne- I-BDAE Gruppe, kwazise leli qembu linolwazi lweminyaka kulo mkhakha.
Kunengqondo futhi kungadingeka kwizakhamizi ezingezona ze-EU ukuthi ziqinisekise namalungu omndeni. Lezi zinsuku ukunakekelwa kwezempilo kungabiza kakhulu.
Hlola Ukuvakasha ukuvakasha, isibonelo, kunikeza ukumbozwa okugcwele nge-EUR 1.10 kuphela ngosuku.
Ulwazi oluthe xaxa ku Umshuwalense wezempilo wabangaphandle eJalimane .